CoreBoot 4.12 iri pano uye inouya nerutsigiro rwemakumi mana nemapfumbamwe uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Darkcrizt | | Updated on 13/05/2020 23:35 | Free Software
Mushure mehafu yegore kubva pane vhezheni yekupedzisira yakaziviswa, kuburitswa kweshanduro nyowani yeCoreBoot 4.12 yakaziviswa umo nhevedzano yekuvandudza yakawedzerwa senge rutsigiro rukuru, kubviswa kwekodhi isingachashandi uye nezvimwe.
1 Chii chitsva muCoreBoot 4.12?
Chii chitsva muCoreBoot 4.12?
Mune iyi vhezheni itsva ye CoreBoot 4.12, 190 vanogadzira vakatora chikamu uye vakagadzirira 2692 shanduko izvo zvakakosha zvikuru zvinotevera.
MuCoreboot 4.12 yakawedzera rutsigiro rwemama 49 mamaboodi, mazhinji acho anoshandiswa pane zvishandiso zveChrome OS.
Nepo kune rimwe divi rutsigiro rwema51 mamaboard akabviswa, kubviswa kwayo kwakanyanya kunoenderana nekupera kwekutsigirwa yemaplate asingachashandi uye shanda kubvisa zvakapetwa zvakafanana bhodhi sarudzo. Mazhinji mabhodhi, ayo akambotaridzwa semhando dzakasiyana, akasanganiswa kuita seti (musiyano), umo module imwe chete inovhara mhuri yemidziyo yese.
Iyo kodhi yekutsigira mapuratifomu AMDFAM10, VIA VX900 uye FSP1.0 (BROADWELL_DE, FSP_BAYTRAIL, RANGELEY), izvo zvisingasvitse izvo zvitsva zvinodiwa, zvabviswa pane kodhi base mukuru. Semuenzaniso, mu FSP1.0 hazviite kuita POSTCAR nhanho.
Tichifunga nezve kucheneswa kwemaviri, kunyangwe hazvo chokwadi kuti huwandu hwemabhodhi akabviswa hunodarika huwandu hwakawedzerwa, iyo rondedzero yemidziyo inoenderana yakawedzera. Iyo nyowani vhezheni yakaitawo yakawanda shanduko ine hukama neiyo kunatsiridzwa rutsigiro rwezvigadzirwa zvinouya neOEM firmware, kusanganisira iwo anobva kuCoreboot.
Pamusoro pekuenderera mberi nekuchenesa kodhi base, manotsi evhoriyamu pamalayisensi mune mafaera misoro vakatsiviwa nemazita mapfupi eSPDX. Mazita evanyori vese vakapinda mukusimudzira anounganidzwa muVANYORI faira. Iwo mahedhiyo maficha akagadziridzwa kudzikisa kodhi yakavharwa panguva yekuungana kwega yega unit unit.
Iyo SMMSTORE Flash Drive Controller inozivikanwa seyakagadzirira kushandiswa kwakawanda. Iyo controller inoshandisa SMM (System Management Mode) modhi kunyora, kuverenga uye kudzima nzvimbo mune flash memory, uye inogona kushandiswa muOS kana firmware zvikamu kuronga zvechigarire kuchengetwa kwezvirongwa, pasina chikonzero chekushandisa mutungamiriri akananga kune yega puratifomu.
Maturu ekuyedza zviyero akawedzerwa, iyo inosangana neiyo nyowani yekuvaka system uye inoenderera pamusoro kushandisa iyo Cmocka fomati. Yese yakatarwa bvunzo / dhairekitori rakagadzirwa mune sosi yemuti yeyuniti bvunzo.
Zvikamu zvino zvinodikanwa x86 masisitimu anosanganisira RELOCATABLE_RAMSTAGE, POSTCAR_STAGE, uye C_ENVIRONMENT_BOOTBLOCK. RELOCATABLE_RAMSTAGE iyo inobvumidza ramstage kuendeswa kune imwe nzvimbo yekurangarira panguva yekumhanya isingawirirane neiyo inoshanda sisitimu kana yekubhadhara madhiraivha (kufamba kwacho kunodiwa sezvo ramstage yakavharirwa muCBMEM yekumhanyisa kurodha kana uchibuda munzira yekumira).
POSTCAR_STAGE yaichinja kubva kuCAR (Cache-As-Ram) kuita kodhi kubva kuDRAM. C_ENVIRONMENT_BOOTBLOCK inobvumidza kushandisa bootblock yakaunganidzwa uchishandisa yakajairwa GCC, panzvimbo yeakasarudzika romcc compiler.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » CoreBoot 4.12 iri pano uye inouya nerutsigiro rwemakumi mana nemapfumbamwe uye nezvimwe